Nepal Deep | ढुक्क हुनुस्! म राजिनामा दिनेवाला छैन्: प्रधानमन्त्री ओली
ढुक्क हुनुस्! म राजिनामा दिनेवाला छैन्: प्रधानमन्त्री ओली
बुधबार, कार्तिक १९ २०७७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि हालतमा आफूले राजिनामा नदिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन, जनताका आवश्यकता र समर्थनले भएको हुँ, त्यसैले अहिले मैले राजीनामा दिने कुरै हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लागेको भन्ने हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले अहिले राजीनामा दिनु देश बर्बादीतिर जान दिनु भएको समेत बताए। अहिले आफूले राजीनामा दिन नमिल्ने पनि उनले बताए।
‘सञ्चारमाध्यमहरूमा हल्ला फैलाइन्छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन पस्यो। तर तपाईंहरू विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले राजीनामा दिनु भनेको बर्बादीतिर जान दिनु हो। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन।’
जनताको आवश्यकताले आफू प्रधानमन्त्री भएको पनि ओलीले बताएका छन्। स्थिरताका लागि आफूले काम गरिरहेको र स्थिरताले विकास तथा परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ। उनले केहि दिन अघिमात्र प्रचण्डसँगको भेटमा पार्टी अलग अलग बनाउन प्रस्ताव गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए।
‘व्यापक जनसमर्थनबाट हो यो ठाउँमा आएको हो। ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्, सरकार फेरिन्छ बदलिन्छ कि भन्ने होइन। केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘भित्र-बाहिर अनेक कोसिस त भए। जेमा पनि आलोचना गर्ने? देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई काम गर्नुपर्छ।’
ओली र प्रचण्डको दुरि बढिरहँदा नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने अड्कलबाजी चलिरहेको छ। ओलीले सोही अड्कलबाजीलाई ‘हल्ला’ का रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।